သငျသညျစစ်မှန်စပိန် Tapas တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မီ, Piazza ရောမမွို့ရှိ, သို့မဟုတ် ခေါင်မိုးပေါ်ရှိကျန်ကြွင်းသောနေရာများ ပရာ့ဂ်၌, admin ရဲ့အရေးပါသောနည်းနည်းလိုအပ်ပါသည်! ရိုးရှင်းစွာအထား, သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်တဲ့အခါသင်များမှာပိုမိုပြင်ဆင်ထား, ပျော်စရာနှင့်သင့်မျှော်လင့်ချက်မှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ခရီးစဉ်သည်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကို သာ..
ဒီတော့ဒီမှာ Save A Train အစွန်အဖျားတစ်ခုပါ: ထိပ်တန်းငါးခုကိုရွေးပါ, ကြောင်းဥရောပစွန့်စားမှုအဘို့အရပါမည်-dos! ကိုယ်က&#၈၂၁၇;့သောက်အတွက် Hofbrauhaus တွင် မြူးနစ်, သို့မဟုတ် တစ်တူးမြောင်းခရီးစဉ်ယူပြီး အမ်စတာဒမ်, သို့မဟုတ် ဒါဝိဒ်သည်-ကနေဆန်းစစ်အများအပြားထောင့် – Florence မှာ. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သူတို့အဆင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့်သူတို့ကိုပတ်လည်မှာသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်. ရထားများကဦးစားပေးမည်.
အဖျား 4: သင်၏ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများကိုဥရောပသို့သွားရန်အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စုရုံးပါ
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, အလွန်အကျွံကျူးလွန်ရန်အလွန်အကျွံညှစ်ရန်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူသည်. ဒါဟာလုံးဝနားလည်င်. သင့်ရဲ့အဖိုးတန်ခွင့်ကောင်းစွာအသုံးချခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် Over-ထုပ်ပိုးဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်သည့်အခါသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဒီအဘိုးထိုက်သောနိုင်ပါတယ် (ကုန်ခမ်းတော့မှာဖော်ပြခြင်းမ), အရမ်းရက်အနည်းငယ်အတွင်းများပြားလွန်းနေရာများနှင့်အတူ Over-ထုပ်ပိုးခရီးစဉ်လမ်းမပေါ်တွင်အချိန်ပိုမိုစေပါတယ်အဖြစ်, နှင့်ပိုပြီးဓါတ်ငွေ့သို့မဟုတ် ရထားလက်မှတ်တွေ. အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်, ကခရီးစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်, ဟိုတယ် Check-ins နှင့် Check-တနေရာတစ်မှုန်ဝါးသို့လှည့် (စဉ်ဆက်မပြတ်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖွင့်နေသည်နှင့်အတူ), ရထားပြတင်းပေါက်အတိတ်တစ်-သွားရောက်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှရှုခင်းပြိုင်ပွဲကြည့်နေစဉ်. ဖြစ်နိုင်လျှင်, အရှိန်လျော့သည်. သငျသညျလိမ့်မယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကယ်တင် နှင့်သင့်နေရာများလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပိုအချိန်ရရှိ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အကွံဉာဏျသငျသညျဥရောပ၌ရောက်လာသောအခါတစ်ဦး ATM စက်များမှဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ခေါင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့် ATM စက်များကဒ် အသုံးပြု. ငွေသားထုတ်ယူ. ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င်, သင်ငွေပေးငွေယူဘို့ get သောငွေလဲနှုန်းနီးပါးဆက်ဆက်ကျွန်တော်ပင်အိမ်ပြန်ဘဏ်များထံမှဆည်းပူးကြပါပြီမည်သည့်နှုန်းထက် သာ. ကောင်း၏. သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာ ATM စက်များငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်စွန့်ခွာမီသင့်ဘဏ် Call, သင်တို့ကဲ့သို့ပြည်ပကသင်၏ကဒ် အသုံးပြု. ပါလိမ့်မည်သောသူတို့ကိုအသိပေး. သင်သည်ထိုသူတို့ပြောပြမထားဘူးဆိုရင်, ဒါကလိမ်လည်မှုလို့ထင်ဖို့သူတို့ကိုသတိပေးလိမ့်မယ်, နှင့်သင့်ကဒ်ပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မယ်. လည်း, သင်၏ဘဏ်ရှိပါတယ်လျှင်မေးဖို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများ သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ ဒေသဆိုင်ရာ ဥရောပတိုက်တွင်ဘဏ်များ.
အဖျား 9: သင်သည်ဥရောပသို့ခရီးမသွားမီသင့်ဖုန်းကိုခေါ်ဆိုရန်မမေ့ပါနှင့်
သငျသညျအပြည့်အဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်ပြီးအစီအစဉ်ကိုကိုယ့်ရဖို့တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Callသင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်, f, ပြီးနောက်သင်မတော်တဆဒေတာစွဲချက်ကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ဖုန်းကိုဖွင့်လှစ်သေချာအောင် (အကျဉ်း: ဆယ်လူလာဒေတာကို turn off နှင့်ဆယ်လူလာဒေတာကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင့် apps တွေရဲ့အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ရန်). နှင့်, အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်, အီးမေးလ်များကိုဒေါင်းလုဒ်ပေးပို့ခြင်းဘို့ကို Wi-Fi ကွန်ယက်လွတ်မြောက်ကပ်, ဝက်ဘ်ကိုစစ်ဆေးနေသည်, နှင့်အသုံးပြု apps များ. ဥရောပအများအပြား Wi-Fi Hotspots ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အကြာကြီးထိတွေ့ထဲကလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. တစ်နည်းအားဖြင့်, သငျသညျဥရောပရသည့်အခါသင်၏ဖုန်းများအတွက် SIM ကဒ်ကိုဝယ်.
အသုံးပြုသူများကိုစတင်ရန်နှင့်ပြီးအောင်တစ်မြို့ကောက်နေစတင်အသုံးပြုနိုင်မည် (အခုအတွက်တော့, တူရာဌာန၌ခရီးစဉ်စတင်အဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖွင့်). ထို့နောက်ထွက်ခွာသွားသည့်ရက်စွဲကိုရွေးပါ, ဘယ်လောက်ရှည် ခရီးစဉ် ဖြစ်များနှင့်မည်မျှပါလိမ့်မယ် ခရီးစဉ် ထည့်သွင်းရန်. သူတို့ဥရောပမှာမြို့ကြီးများကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အသုံးပြုသူများလည်းရွေးနိုင်သည်, ဥရောပသမဂ္ဂ, ဒါမှမဟုတ် Schengen ဇုန်. ဒီ app ထို့နောက်တစ်ဦးခရီးစဉ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးချင်းစီမွို့၌ Airbnb နှုန်းထားများနှင့်အတူပြည့်စုံ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်သူတို့အဘို့.
ခရီးသွားများအသုံးပြုနိုင်သည် အဆိုပါ Eightydays က်ဘ်ဆိုက် or the newly launched iOS က app ကို to plan their European voyages.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ကုလားပဲ #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys ရထားအကြံပေးချက်များ ခရီးသွား traveltips